Midowga Yurub oo xaqiijiyay in uu mar kale dib u bilaabi doono dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Midowga Yurub oo xaqiijiyay in uu mar kale dib u bilaabi doono dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo
safiirka Midowga Yurub Nicolás Martine iyo madaxda Puntland 15-Sep-2019
Dowladda Puntland ayaa mar kale xaqiijisay in Midowga Yurub uu dib u bilaabi doono dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo oo bishii September ee sannadkii 2018 la joojiyay kadib markii musuq maasuq lagu eedeeyay hay’adda waddooyinka Puntland ee PHA.
Af-hayeenka xukuumadda Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac (Dabaraani) oo ka warbixinayey kulan shalay dhexmaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolás Berlanga Martine ayaa xaqiijiyay in mar kale uu Midowga Yurub ballan-qaaday dib u bilaabidda mashruucii istaagay ee dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo.
Mashruuca dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo waxaa la daah-furay 11-Maarso 2015 waxaana xilligaasi la shaaciyay in ay ku baxayso lacag dhan $21 malyan oo Dollar taasi $18 malyan oo kamid ah ay bixinayso Midowga yurub halka $3 malyan ee kalena ay bixinayso dowladda Jarmalka.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo ay weheliyeen safiiradii Midowga yurub iyo Jarmalka xilligaasi u qaabilsanaa Soomaaliya Michele Cervone d’urso iyo Andreas Pesxhke ayaa maalintaasi ballan-qaaday in xukuumaddiisa ay ka go’antahay fulinta mashruuca.
Balse qoraal 5-September 2018 ka soo baxay safaaradda Jarmalka ee magaalada Nairobi ayaa lagu shaaciyay in la joojiyay mashruuca kadib markii ay musuq maasuqdat hay’adda waddooyinka Puntland ee PHA.
Hayeeshee dowladda Jarmalka ayaa mar kale 7-di bishii April ee sannadkan sheegtay in dib loo bilaabi doono dayac-tirka iyo dhismaha wadada Garoowe-Gaalkacyo kadib kulan dhexmaray safiiradda Jarmalka ee Soomaaliya Annett Günther iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Jarmalka waxaa fulinta mashruucan u qaabilsan hay’adda Horumarinta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee GIZ taasi oo mashaariic kalena ka fulisay degaannada Puntland.
Halkan ka daawo hadalka Af-hayeenka